Fampitiavana ny teny sy ny soratra: taona 2021, ilaina ny fanatanterahana fifaninanana | NewsMada
Fampitiavana ny teny sy ny soratra: taona 2021, ilaina ny fanatanterahana fifaninanana
Tsy maka tahaka befahatany akory fa miaina ny soa fianatra! Any ivelany, saika isam-bolana, misy hatrany ny fifaninanana eo amin’ny tontolon’ny teny sy ny soratra. Ny ankamaroan’izy ireny, loka goavana no zaraina. Tsy mba tahaka izany ny an’ireo tany voazanaka, anisan’izany i Madagasikara. Oviana no mba nisy fifaninanana lehibe momba ny fahaiza-manoratra teto? Oviana no mba nomena mari-pankasitrahana lehibe ireo nahavita be eo amin’ny teny sy ny soratra, sns. Ilaina anefa izany!
Matetika, ireo fikambanana na vondrona samihafa no manatanteraka io fifaninanana io. Voafetra ihany anefa ny vitan’izy ireny. Misy aza hetsika tsy tafavoaka ny distrika iray akory. Ankoatra izay, indray mandeha isan-taona ihany vao mety hisy io fifaninanana io noho ny tsy fahampian’ny hoenti-manana eo amin’ireny fikambanana ireny.
Taona 2021, fotoana tokony hanatevenana ny efa natao hatramin’izay. Halehibeazina araka izay azo atao ny sehatra ivelaran’ny teny malagasy. Tsy tokony ho ny efa nanao hatramin’izay ihany no andrasana hanohy izany. Entanina manokana ireo orinasa malagasy hanatanteraka ny adidiny manoloana ny fahapotehan’ny teny malagasy. Mila azy ireny ny fampandrosoana sy ny fanomezana aina ny tenindrazana!